जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! – Khabaarpati
December 24, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला !
फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । किनकि मृत्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो लास होइन । लास त त्यो हो , तपाईं जिउँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।जिन्दगी थोरै छ , हरेक पल म खुशी छु . काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन , हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु\_ आज कोही रिसाएको छ, उ रिसाएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु।
हाकिमसँग ओछ्यान तताउन जान महिला प्रहरीले छोरीलाई भ्यानमा को’चिन् फर्किदा मृत्यु भइसक्छ !